Fetiben'ny zavakanto any Karaiba: Aiza ny kolotsaina Indo-Karaiba?
Home » Editorial » Fetiben'ny zavakanto any Karaiba: Aiza ny kolotsaina Indo-Karaiba?
Septambra 3, 2019
Fanontana nataon'i Ms. Sherry Hosein Singh, Trinidad, West Indies
Tonga ny Fetiben'ny Zavakanto any Karaiba (CARIFESTA) any Trinidad sy Tobago ary lasa ny 6 tapitrisa dolara.
Tokony hatao ny fandidiana aorian'ny fandidiana.
Mikasika ny kolontsaina Indo-Karaiba ao CARIFESTA, dia natao an-jorom-bala tamin'ny fampisehoana Trinidad, Guyana, ary Suriname. Ny famakafakana votoatin'ny isan-jato no hanaporofo an'io fanambarana io.
Ny karana no mandrafitra ny foko maro an'isa any amin'ireo firenena ireo ary koa ny foko maro an'isa ao Karaiba miteny anglisy.
Aza hadino mihitsy ny fitafiana am-baravarankely an'i Ramleela kely eto sy ilay Sangeeta kely any CARIFESTA.
Ity tokenism ity dia naseho tamin'ny fomba mazava tao amin'ny lanonam-panokafana tao amin'ny Queen's Park Savannah, Port-of-Spain, ny zoma alina teo rehefa nihira ny “Trini to the bone” i David Rudder. Ilay mpihira Indo Neval Chatelal sy mpandihy indianina sasantsasany dia nanitsaka ny rambony (tsy niteny toa ny alika, eh) tamin'ny fotoana naterak'i Rudder.
Ny feon'i Chatelal dia nesorina mba hanomezana aurality an'i Rudder. Nikasika an'i Rudder i Chatelal, nitady fankasitrahana sy fanekena azy, saingy tsy niambina azy akory i Rudder.
Tao amin'ny symposia CARIFESTA ao amin'ny University of the West Indies (UWI), ny mpandahateny rehetra dia tsy ny Indiana sy ny kolontsaina indianina ihany no tsy niraharaha azy ireo tanteraka.
Tamin'ny dinika nifanaovana tamin'ny reparations momba ny fanandevozana, ohatra, ny indentureship dia tsy noresahina akory. Tsy nisy karana na tafavoaka velona tamin'ny fandripahana amerikanina natao solontena tamin'ny tontonana.
Ny hevi-dehibe momba ny fanavakavahana dia naseho ny alatsinainy 19 aogositra lasa teo tao amin'ny University of the West Indies (UWI) rehefa niresaka momba ny lohahevitra "Re-Imagining Caribbean Futures" ny Profesora Kei Miller.
Miller, sy ireo mpandahateny rehetra tonga teo alohan'io hariva io - ny profesora Brian Copeland, ny minisitra Nyan Gadsby-Dolly, ny dokotera Paula Morgan, ny dokotera Suzanne Burke, ary ny MC Dr. Efebo Wilkinson - dia namaritra ny kolontsaina tany Karaiba ho karnavaly amin'ny fisehoany rehetra.
Ny pan, moko jumbies, J'ouvert, devoly manga, Dame Lorraine, Sailor Mas, sns ihany no noresahin'izy ireo ihany koa ny dancehall, reggae, ary soca. Tsy misy teny na iray aza amin'izy ireo momba ny Divali, Hosay, Ramleela, kassida, Pichakaree, Rath Yatra, chutney, churail, saaphin, tassa, sns.
Bahamas: ivon-toerana iadiana amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy manerantany
Fitsangatsanganana iraisam-pirenena miditra any Etazonia: Misy zavatra tokony hampanahy?